जीवनमा एकपटक मात्र नुहाउने यी आदिवासी महिलाहरु
एजेन्सी । संसारमा धेरै रहस्यमयी जनजातिहरू बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरुको परम्परा, रहनसहन र खानपानको चर्चा सधैं हुने गर्छ । संसारमा बसोबास गर्ने आदिवासी प्रजातिहरूले अझै पनि हजारौं वर्ष पुरानो परम्परालाई पछ्याइरहेका छन् । विस्तृतमा
पाकिस्तानी प्रमभन्दा उनकी श्रीमती धनी
एजेन्सी । दुई जोईका खसम पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ र पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान आफ्ना श्रीमतीभन्दा गरिब भएको पाइएको छ ।
निगुरो टिप्न जाँदा बाघले आक्रमण गरेपछि...
चितवन । निगुरो टिप्न जाँदा बाघको आक्रमणमा परी एक जना बेपत्ता भएका छन् । भरतपुर महानगरपालिका–२७ का २३ वर्षीया रेखा बस्नेतलाई आज बिहान बाघले आक्रमण गरेको हो ।स्थानीय राधाकृष्ण सामुदायिक वनमा निगुरो टिप्न गएकामध्ये उनलाई बाघले आक्रमण गरको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
अडानीले फेरि एकपटक पछि पारे अम्बानीलाई
एजेन्सी । रिलायन्स ग्रुपका अध्यक्ष मुकेश अम्बानी अब एसियाकै धनी व्यक्ति रहेनन् । उनलाई गौतम अडानीले पछि पारेका छन् । यद्यपि भारतका दुवै उद्योगपति अझै पनि विश्वका अर्बपतिको शीर्ष १० मा छन् ।
इजरायलले दुई इरानी वैज्ञानिकलाई विष खुवाएर हत्या गरेको इरानको दाबी !
एजेन्सी । दुई जना युवा वैज्ञानिकको मृत्युपछि इरानमा हलचल मच्चिएको छ । मे महिनाको अन्त्यमा अचानक बिरामी पर्नुअघि दुवै युवा स्वस्थ थिए ।
रुस–युक्रेन युद्धः मारिउपोलका सडकमा शव सड्न थाले, हैजा फैलिने खतरा
एजेन्सी । रुस र युक्रेनबीच युद्ध जारी छ । रुसी सेनाले युक्रेनी सहरहरुमा लगातार मिसाइल प्रहार गरिरहेको छ । यसैबीच, सेभेरोडोनेत्स्कमा युद्ध तीव्र भएको छ। यहाँ रुसले नदीमा बनाएको पुल भत्काइदिएको थियो ।
जब एक ड्राइभरले जलिरहेको तेल ट्याङ्कर चलाएर भीडदेखि पर लगे...(भिडियो)
एजेन्सी । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ इस्लामाबादमा ट्रक चालकलाई सम्मान गर्ने भएका छन् । पाकिस्तानमा ‘हिरो’ भनेर चिनिने मुहम्मद फैसल नाम गरेका तेल ट्याङ्कर चालकले भीडबाट जलिरहेको ट्यांकर चलाएर कैयौँको ज्यान बचाएका थिए ।
गाँजालाई वैधानिक मान्यता दिने एशियको पहिलो देश बन्याे थाइल्याण्ड
एजेन्सी । थाइल्याण्ड गाँजालाई वैधानिक मान्यता दिने एशियको पहिलो देश भएको छ । थाइ सरकारले गाँजाखेती गर्न र त्यसलाई आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने कानुनी प्रबन्ध गरे पनि धुमपानका रुपमा गाँजाको सेवनलाई निरुत्साहित गरेको छ ।
अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति असरफ घानी तीनवटा हेलिकप्टरमा कति रकम लिएर भागेका थिए ?
एजेन्सी । एक अमेरिकी एजेन्सीले अफगानिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति असरफ घानीले देश छाड्दा आफूसँग १० लाख डलरभन्दा कम लिएको दाबी गरेको छ ।
के यो तस्वीरमा तपाईले १६ वटा बाघ देख्नुभयो ?
एजेन्सी । अप्टिकल इल्युजनले आजकल इन्टरनेटमा शासन गरिरहेको छ। कोही पनि यी मस्तिष्क अभ्यासहरूबाट टाढा हुन सक्दैनन् जसले संज्ञानात्मक सीपहरू बढाउन मद्दत गर्दछ।
भेटियो क्यान्सरको उपचार विधि, ६ महिनामा बिरामी पूर्ण निको !
एजेन्सी । चिकित्सा क्षेत्रमा विकास भए पनि क्यान्सरजस्ता रोगलाई निको नहुने रोगको श्रेणीमा राखिएको छ । तर, हाल क्लिनिकल ट्रायलपछि त्यसमा प्रयोग गरिएका बिरामीले शतप्रतिशत सार्थक नतिजा पाएको र क्यान्सरबाट पूर्णतया मुक्त भएको दाबी गरिएको छ । यदि यो औषधि भविष्यमा पनि प्रभावकारी रह्यो भने यसलाई क्यान्सरको लागि संजीवनी मानिने मिडिया रिपोर्टमा उल्लेख छ ।